I-China L-Lysine HCL 98.5% CAS 657-27-2 yabakhiqizi bebanga lokuphakela nabaphakeli | Honray
I-L-Lysine HCL 98.5% CAS 657-27-2 yeBanga Lokuphakelayo
ILysine (iLisine efushanisiwe) ingenye yezingoma ezibalulekile zamaprotheni. Umzimba udinga iLysine engenye yama-amino acid ayisishiyagalombili abalulekile. Kepha iLysine ayinakwenziwa ngumzimba. Kumele inikezwe ekudleni. Ngakho-ke ibizwa ngokuthi "i-amino acid yokuqala ebalulekile". Njengesisebenzeli esithuthukisa umsoco, uLysine angakhuphula izinga lokusebenzisa amaprotheni ukuze akwazi ukukhulisa umsoco wokudla kakhulu. Iyasebenza futhi ekuthuthukiseni ukukhula, ekulungiseni isifiso sokudla, ekunciphiseni ukugula nokwenza umzimba uqine. Ingakhipha iphunga futhi igcine kukusha ekudleni okusemathinini.
I-1) Isetshenziswa ekulungiseleleni ukuhlanganiswa kwegazi i-amino acid nokwenza umphumela ube ngcono kune-hydrolytic protein transfusion kanye nemiphumela engemihle.
I-2) Ingenziwa izengezo zokudla okunomsoco ngamavithamini nama-glucoses ahlukahlukene, amuncwa kalula ngamathumbu emathumbu ngemuva komlomo.
3) Thuthukisa ukusebenza kwezinye izidakamizwa futhi uthuthukise ukusebenza kwazo.
I-Lysine uhlobo lwe-amino acid ebalulekile yabantu. Ingakhulisa ukusebenza kwe-hematopoietic, uketshezi lwesisu, ithuthukise ukusebenza kahle kwamaprotheni, inyuse ukumelana nezifo, igcine ibhalansi yemetabolism futhi ivune ukuthuthuka komzimba wezingane nokukhalipha.
1) Thuthukisa ikhwalithi yenyama futhi wandise amaphesenti enyama enciphile
2) Thuthukisa ukusebenza kahle kweprotheni yokuphakelayo futhi unciphise ukusetshenziswa kwamaprotheni ongahluziwe
I-3) ILysine iyisithuthukisi sokudla okunomsoco wefolishi nomsebenzi wokuthuthukisa isifiso sezilwane nezinyoni, ukumelana nezifo, ukuphulukiswa kwamanxeba, ikhwalithi yenyama kanye nokwenza ngcono uketshezi lwesisu. Kuyinto ebalulekile yokuhlanganisa i-cranial nerve, i-germ cell, amaprotheni kanye ne-hemoglobin.
4) Gwema izigaxa zezingulube, wehlise izindleko zokuphakelayo futhi uthuthukise ukubuya kwezomnotho
ILysine iyatholakala ngokufometha i-amino acid perfusion eyinkimbinkimbi nokwenza umphumela ube ngcono kune-hydrolytic protein perfusion kanye nemiphumela engemihle. Ingenziwa i-ejenti yokuthuthukisa okunomsoco ngamavithamini nama-glucoses ahlukahlukene, futhi itholwa kalula ngamathumbu emathumbu ngemuva komlomo. ILysine futhi ingathuthukisa ukusebenza kwezinye izidakamizwa nokusebenza kwazo kahle.
Assay (isisekelo esomile) .598.5%
Ukujikeleza okukhethekile + 18.0 ° ～ + 21.5 °
Ukulahlekelwa kokomiswa .01.0%
Izinsalela zokushisa ≤0.3%
Usawoti we-ammonium (NH4+ isisekelo) ≤0.04%
I-Arsenic (njengoba i-As) ≤1.0 mg / kg
Izinsimbi ezisindayo (njenge-Pb) ≤10 mg / kg
PH Inani I-5.0 ～ 6.0
Langaphambilini Intengo engabizi Cas No. 61-90-5 - DL-Methionine CAS 59-51-8 ye-Pharma Grade (USP / EP) - Honray
Olandelayo: I-L-Threonine 98.5% CAS 72-19-5 Ebangeni Lokuphakelayo
I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 YeBanga Lokuphakelayo
I-L-Threonine 98.5% CAS 72-19-5 Ebangeni Lokuphakelayo
L-Valine 72-18-4, I-Pharm Grade L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Ukudla Kwezilwane, L-Threonine Pharm Ibanga, L-Threonine Ibanga Lokudla,